खै तीजको मैलिकता ?
भाद्र १६, सल्यान । भारतमा छतिसगढी भाषामा ‘तीजा’ शब्द चर्चित छ । समय सँगै त्यो शब्द नेपालमा आयो र तीज भयो । त्यो भाषामा तीजको अर्थ हुन्छ साउन महिना या वर्षा याममा निस्कने एक प्रकारको किरा । अर्को शब्दमामा भन्नुपर्दा हरितालिका हरित र तालिका जोडिएर हरितालिका भयो । यसले विषेश त हरियो मौसम को पर्वको अर्थ दिन्छ ।
विषेशगरी यो पर्व महिलामौत्री भनिन्छ । मुलतः यो उत्तर भारत र नेपालमा मनाइन्छ । कुनै पनि पर्वले धर्मको आकार ग्रहण गरिसकेपछि त्यसलाई जनसमुदायहरुको आफ्नो श्रमसँग, प्राकृतिक त्रियासँग वा आफ्नो विश्वास सँग जोडेर धर्मकरण गरिन्छ । त्यसैले यो कथा लिंगपुजा भनेर बुझिन्छ ।
महादेव-पार्वतीको कथासँग जोडेर यो पर्वलाई मनाउने गरिन्छ । विषेश त पार्वती निरहा व्रत बसि महादेवको लागि पानी नखाई महादेव लाई पाँउ भनेर गरिएको एउटा पौराणिक कथा सँग जोडिएको पर्व हो यो ।
बर्ष भरीको थकान, अनि माइतीघरको सम्झनामा आफ्ना दाजु, भाइ, आफ्नो चेलीलाई माइती लिने परम्परा र आफ्नो आमा सँग मिठा भलाकुसारी गर्ने चलन देखि लिई अहिले तीज पर्व मनाउने तरिकामा ब्यापक परिवर्तन आएको छ । नेपाली समाजमा सबै पर्वका गीतहरु हामीले सुन्दै आएका छौं तर अहिले संगीत स्वयं उपोभोक्वादतिर गयो ।
आजकाल बजारमा आएका तीज गीतले खासै मन छुँदैन । सबै त होइन तर अधिकांश बजारमा आएका अहिलेका तीज गीतले दिन खोजेको सन्देशनै बुझिदैन् । तीजका गीत त पहिलेकै राम्रा थिए । जहाँ हरेक दुख, सुख, रोदन, पीडा, खुसी सबै समाज र देशका गतिविधी बोकेका हुन्थे । अझ ती तीज गीतमा नारीका वेदना पोखिन्थे ।
‘तीजमा माइत जान नपाएको, सासुससुरा, नन्दआमाजु, देवरजेठाजु, श्रीमान्ले दिएको दुःख, नारी वेदना त कतिपयले उनीहरुले दिएको मायाका साथै मेलापात, उकाली–ओरालीका भाव समेटी मौलिक तीज गीत गाइन्थ्यो ।
हामफालेर मरौँ कि त्रिशूलीको पानीमा
घरमा बसौँ सौता छ, माइत सानीमा…
यो गीत २०६२- ६३ सालतिर शर्मिला गुरुङले गाएकी हुन् । यो गीतको अडियो, भिडियो र शब्द हेर्दा र सुन्दा सबै व्यथा हाम्रो आखै अगाडि झल्किन्छ । संगीत भनेको जीवन्त हुनुपर्छ ।
त्यो बेला गाईएका आज मेरो माइत जाने पालो, तीज आयो दिदि लिनलाई, सुनभन्दा महंगो मेरै बुढा हुन्, टिपन सकिन खाईन बरिलै लगाएतका थुपै तीज गीत अझै पनि मानिसको मनासपटालमा झुण्डीएका छन् । तर आजभोली रातारात हिट हुने, देश विदेशका स्टेजमा प्रस्तुति दिन पाइने प्रलोभनले अहिलेका गीत, परम्परा र सस्कृतिमा ठुलो विकराल समस्या आएको छ ।
लोक गीत भनेर जति अहिलेको समयमा तीज गीत निकालिएका छन् । त्यहाँ हामी खासै लोक देख्न सकिदैन लोक गीत भनेको र तीज गीत भनेको सबै जनताले बुझ्को हुनुपर्छ । पर्व मनाउन पाउने सबैको मौंलिक अधिकार हो । यो पर्व सबै चेलिको बेथा एकै ठाउँमा हाँसीखुसी साथ साटासाट गर्ने माध्यम पनि बन्न सक्नुपर्छ र सबै महिलाहरु आस्थाले व्रत बस्नुपर्छ बलकि जबर्जस्ति होइन ।
कतिपय ठाउँका महिलाहरुले तीज आउनु एक महिना अघिदेखि नै दर खाने कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छन् । आज तीजको दिन हो । दिदिबहिनी आपसमा मिलेर, दुःख सुख बाँड्दै रमाइलो गर्नु राम्रो हो । तर अनावश्यक खर्च गरी भड्किलो रुपमा तीज मनाउनु राम्रो होइन । अन्तत तीजको सबैलाई शुभकामना !
प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र १६ गते सोमवार